3 Atụmatụ iji dokwuo anya nke mgbagwoju anya nke ire ahịa na Millennials | Martech Zone
Gịnị n'ezie bụ otu puku afọ? Nke a bụ ajụjụ a na-ajụkarị n’ụwa niile. Maka ụfọdụ, ọnụọgụ mmadụ a bụ enweghị mmetụta, umengwụ na enweghị amụma. Nye Odyssey, anyị na-ahụ ka ha nwere mkpali, selfaware na nke a na-ahụ anya. Ọgbọ ụfọdụ na-abanyekarị n'ụkpụrụ ụfọdụ na atumatu iji mee ka uche ha nwee ike bụrụ isi. otu kacha dabaa.
Nhazi onwe ya bu ihe nile
O nweghi otu onye. Kemgbe ọtụtụ narị afọ, ndị mmadụ nọ na-ekwu okwu ndị a kpọmkwem, ya mere, gịnị agbanweghị echiche a? Puku Millennials abughi ihe ozo, ya mere ikwesiri igbasa ha uzo di iche iche. Simon Sinek tinyere ya nke ọma mgbe o kwuru na Nzukọ TedX:
Ndị mmadụ anaghị azụta IHE ị na-eme, ha na-azụ ihe mere I ji eme ya
Jụọ ndị ahịa gị, ha na - ere ahịa ihe anyị na - eme ma ọ bụ ihe kpatara anyị ji eme ya? Onu mmadu nke puku mmadu nwere ihe nile na aka ha maka ijikọ, ahia na ntule, ya mere ha adighi acho ihe nile ka ha ghota. Elekwasị anya n'iji ngwaọrụ ịkọ akụkọ banyere akara gị ma ọ bụghị naanị eziokwu siri ike nke ihe ị na-eme.
Nkwenye na-enye ohere maka mkpa: jiri nnukwu okporo ụzọ
Nkwukọrịta okwu ababeghị karịa ka ọ dị ugbu a. Anyị bi n’ime ụwa nwere ederede, oku ekwentị, netwọkụ na mmekọrịta mmekọrịta, ozi ịntanetị na ihe ndị ọzọ. Enweghị mkpa ime onwe gị niile, hapụ ndị ahịa gị ka ha nyere gị ya. Millennials nwere ọtụtụ teknụzụ karịa ọgbọ ọ bụla n'akụkọ ihe mere eme ya mere ikike ha nwere inye ma nweta nzaghachi na nzụta ha bụ site na ịpị bọtịnụ. Sdị kwesịrị iji netwọk a nke ọtụtụ puku afọ iji nyere aka mee ka akara ahụ dị irè ma ọ ga-abụ na ọ ga-agbasa dị ka ọkụ. Ozugbo ọ ghọrọ ihe ndị enyi ọtụtụ puku afọ jirila, ị banyela n'okporo ụzọ dị elu nke njikọ na ụwa.
Emela ka ike gwụ gị ike
N’ebe dị iche iche na ndụ, ndị mmadụ na-ajụ ajụjụ a mgbe niile Olee otú m si eme omume dị ka nwata ma ọ bụ olee otú m si eme agadi?. Enwere ọtụtụ imirikiti akwụkwọ, ihe nkiri sịnịma na ihe onyonyo na-egosi ihe niile nwanne m nwoke ma ọ bụ na agbata obi enyi na-agbalị ime ihe siri ike ma ọ bụ yie okenye. Alsowa na-arụ ọrụ n'ụzọ ọzọ ma anyị na-ahụ ngbanwe dị ukwuu na ikike ndị na-eto eto iji jikwaa ma metụta mkpebi nke ndị ọrụ ibe, ndị nne na nna ma ọ bụ ndị ndụmọdụ. A hụla ihe a na nnukwu nsogbu nke ọgbọ ndị okenye na-etinye aka na mgbasa ozi mmekọrịta. Yabụ, tupu akara gị elekwasị anya na igwe mmadụ ochie, jụọ onwe gị ajụjụ a Enwere ụzọ ọzọ iji ruo ndị na-ege m ntị?
Yabụ kedu ka esi etinye n'ọrụ atọ ndị a? Ihe omuma nke ndi mmadu Odyssey dị na azụmahịa nke na-enyere ndị mgbasa ozi na ụdị aka iru ọtụtụ puku afọ. Amamihe jikọtara na njikọ aka na otu ikpo okwu. Odyssey nwere nnweta na 12,000 + ndị na-eme ihe ike puku afọ, yana n'ihi obodo ahụ buru ibu, Odyssey nwere ike inyere ndị ụdị aka inweta ndị otu lekwasịrị anya na nghọta sitere na ndị na-ege ha ntị na-ere ahịa ha, ma mee ya na ntụgharị ọsọ ọsọ. Ndị otu ahụ na-elekwasị anya na-ewepụta ihe okike, ụzọ ọhụụ na nke ahaziri iche iji ruo ma jikọtara ndị na-ege ntị puku afọ.
A na-atụle ndị na-eme ihe Odyssey microinfluencers, akọwapụtara dị ka ndị na - azụ ahịa kwa ụbọchị nwere ndị na - eso ụzọ 500 to 5,000 dị elu. Microinfluencer ahia bu banyere ichota ndi ahia ndi bara uru na ndi nwere mmetụta gburugburu ahia gi, na site na okike nke ederede edeputara na mgbasa ozi ndi mmadu, bu ihe kachasi nma n'ime ntughari ndi mmadu na ebumnuche ahia gi.
Ihe puru iche banyere Odyssey bu na o toro site na 0 rue nde mmadu iri ato na-aru ihe n’erubeghi afo abuo, ha nile. A na-ekesa ọdịnaya niile n'usoro na nke ọma site na ịkekọrịta ndị ahịa, ọ bụghị ụgwọ maka mgbalị gụnyere mmekọrịta mmekọrịta ma ọ bụ SEO.
Banyere June 2016, Odyssey nwere:
12,000 + ndị na-emepụta ọdịnaya
Obodo 1,000 +
50,000 ederede bipụtara kwa ọnwa
87% nke okporo ụzọ na-ezo aka na mmekọrịta mmadụ na ibe ya
82% nke ndị na-ege ntị na-agụ na ngwaọrụ mkpanaka
30 + nde ndị ọbịa pụrụ iche kwa ọnwa (Nchịkọta Google)
Ihe niile gbasara ọgbọ Narị Afọ Iri na nke Gen Z, yana inwe akara gị ga-abụ ezigbo, na-eme ka a na-eguzosi ike n'ihe
Tags: kpọsaa na millennialsAhịa ka ọtụtụ puku afọpuku afọ nke mgbasa oziahịa puku afọMillennialsOdysseyodyssey na ntanetịelekọta mmadụ mediaelekọta mmadụ na netwọk
Ihe Mmekọrịta nke Ọha nke Anyị Mụtara Mgbe Anyị Na-akpụ Akụkọ Anyị
Njirimara na Agency Agency nke ndị CMO chọrọ
Dec 2, 2016 na 12:39 PM
Ha bu onodu mmadu na etolite etolite nke nwere ike isiri ike ibanye maka ndi okenye!
Jan 27, 2017 na 12: 22 AM
Edemede mara mma ma juputara na echiche okike. Daalụ maka ịkekọrịta isiokwu ahụ.